TEDx Antananarivo [nohavaozina] | rafozan-doza |
TEDx Antananarivo [nohavaozina]
Published on 11/26,2010
Mba ho fahafinaretan'ny mason'i Andrytia, mpankafy, sy ho fanajana ny aza ampijaliana ny tenintsika dia indro ny lahatsoratra TeDx Antananarivo nosoratana teny malagasy ranoray, tsy misy diso tsipelina:
Mino aho fa efa hitan'ny be sy ny maro ity: Tedx Antananarivo.
Izy ity izany dia karazana fihaonana natao hiresahana momba ny tontolo iainana. Eny, fantatro tsara hoe mety mivarina ao @ ilay talenta malagasy hoe lany andro manao fivoriana fotsiny indray ity fa tsy misy zavatra vanona akory... Tsy dia izay anefa satria isika dia anisan'ny hoe firenena tsy mba manana fijery na hoe drafitr'asa mazava momba ny hoe fiarovana ny tontolo iainana. Eny e, mety misy ihany aloha izany fa ny tena marina dia tsy fanta-bahoaka, tsy mba nampandraisana anjara ny vahoaka ary tsy raharahian'ny vahoaka ka ohatra ny hoe tsy misy ihany... Ity fihaonana ity izany dia anisan'ny hoe dingana @ izay hoe mba atomboka ny firesahana ny tontolo iainana. Sady somary mifantoka kokoa @ resaka fiovan'ny toetr'andro eto @ izao tontolo izao ilay izy. Izany hoe mety hivelatra @ iraisam-pirenena ihany ilay resaka... dia izay eee, tsara ny miresaka ary tokony miresaka sy mifampidinika aloha vao manao zavatra. Indraindray ihany koa ny firesahana dia anisan'ny hoe fanairana ny tompon'andraikitra hifoha sy hahatsapa hoe mila mandray andraikitra izy... "Ny hevitra no mitondra sy mitarika an'izao tontolo izao"... araka ny voalazan'i Ernest Renan.
Tedx ny anaran'ilay izy satria moa tohanan'ny TED izany ilay fihaonana. Efa hitako nivezivezy teo @ twitter ihany izy ity ka mino aho fa efa mahafantatra daholo isika hoe rahampitso @ 3 ora tolak'andro izany. Jereo ilay rohy ery ambony io raha mila fanazavana fanampiny... somary nitontona tany @-na imailaka tsy tokony hahatongavany taty amiko ilay izy, asa na noho ilay hoe TED angaha, fa dia gaga be mihitsy aho... hoe zavatra matotra tsara ity izany! Minoa ahy, maty antoka ianao raha tsy manatrika... dia izay ee, mba halalaho ny fandaharam-potoananao fa zavatra tsara sy manan-danja ity. Sady adin'ny efatra ora fotsiny farafahabetsany, mirava @ fito hariva. Izany hoe raha ohatra ka mbola misy tokony haleha ianareo avy eo dia tena hoe mirava aram-potoana tsara ahafahana mamonjy izany... Misy olona maromaro hanao famelabelarana ihany koa @ io fihaonana io... izany hoe tsy ho mahamonamonaina be ny resaka :-)
* Jereo eto ny lahatsoratra orijinaly.
* Vakio ilay hevitra eo ambanin'ny nataon'i Andrytia, mikasika ny politika fanaovana lahatsoratra eto @ fialamboly.
Posted by simplex at 13:20 Hametraka hevitra (17) ¦ Verindrohy (trackback) (0) ¦ Dago